ग्रिनल्यान्ड र एन्जल्स हर्टलाई इबिए कप - Nayapul Online
काठमाण्डौँ – ग्रिनल्यान्ड र एन्जल्स हर्टले प्रथम इबिए कप अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिताको उपाधि सोमबार जितेका छन् । ग्रिनल्यान्ड सिनियर गल्र्स तथा एन्जल्स हर्ट जुनियर ब्वाइजमा च्याम्पियन बने । धापासीस्थित आयोजक इडेन ब्रिज एकेडेमी (इबिए) को कोर्टमा भएको गल्र्सको थ्री बाइ थ्री फाइनलमा ग्रिनल्यान्डले टीआईएलाई ७–३ ले पराजित ग¥यो ।
ग्रिनल्यान्डकी सितोषना केसीले ४ तथा सुजाता जागरीले ३ अंक जोडे । ब्वाइजको उपाधि भिडन्तमा एन्जल्स हर्टले बिएनएलाई ४३–३२ ले हरायो । एन्जल्स हर्टका शेखर मगरले १८ स्कोर गरे । फाइनलका सर्वाधिक स्कोरकर्ताद्वय शेखर मगर तथा सितोषना केसी आ–आफ्नो विधामा ‘मोस्ट भेलुएबल’ घोषित भए । ब्वाइजमा बिएनएका सन्देश खड्का तथा गल्र्समा टीआईएकी रिन्छेन मोक्तान सर्वाधिक स्कोरकर्ता बने । प्रतियोगिताभर सन्देशले ६२ तथा रिन्छेनले २७ स्कोर गरे ।
ब्वाइजमा सुनील मल्ल तथा गल्र्समा इशा मगर उदीयमान खेलाडी चुनिए । दुवै आयोजक इबिएका हुन् । ब्वाइजमा नेपाल मोडेल तथा गल्र्समा पारामाउन्ट एकेडेमीले अनुशासित टिमको उपाधि हात पारे । विजेतालाई टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारी, आयोजक इबिएका प्रिन्सिपल प्रेमकुमार राईलगायतले एक कार्यक्रमबीच पुरस्कृत गरे । माघ ८ गतेदेखि सुरु प्रतियोगिताको ब्वाइजमा १२ तथा गल्र्समा १६ टिम सहभागी थिए ।
कसको कमजोरी हो ? २३ वर्षसम्म बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर नबन्नु
पुरुष फुटबल: पुलिस र प्रदेश नं. २ विजयी